ओलीको ‘टाक्स’ र भारतीय मिडियाको ‘होमवर्क’ « Post Khabar
ओलीको ‘टाक्स’ र भारतीय मिडियाको ‘होमवर्क’
Published on: 18 July, 2020 11:14 am
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा पुगेर भन्नु भएछ, ‘मैले हतार गर्न खोजेको भए दुर्घटना वा अर्को के हुन्थ्यो म भन्न सक्दिनँ ।’ उहाँले ‘तत्कालीन एमाले र माओवादीले पार्टी एकता गर्ने संकल्पका साथ साझा घोषणापत्र र उम्मेदवारका साथ जनतामा गएको र जनताले असाधारण विश्वास गरेर झण्डै दुई तिहाई मत दिएको भन्दै उहाँले यसलाई कसैले कमजोर पार्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीको एउटा अध्यक्षको हैसियतले देश र पार्टी दुर्घटनामा जाने कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन अन्तिम समयसम्म धर्यतापूवर्क पहल गर्ने विश्वास दिलाउँछु ।’
किन हो ! उहाँले चितवनबासीबीच साँचो कुरा गर्न सक्नु भएन । उहाँले मैले प्रधानमन्त्री हुन हतार गरेकोले पार्टीमा यस्तो अवस्था आएको हो भनेर भन्न सक्नु भएन । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही विदेशी शक्ति मेरो राजीनामा मागिरहेका छन्, यो कार्यमा हाम्रा केही साथीहरु पनि लागिरहेका छन् भन्नुभएछ । स्थायी कमिटीको बैठकमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले तपाईको राजीनामा भारतले हैन मैले मागेको बताउनुभयो । जसरी, २०७२ सालमा भारतले नेपालमा औषधिसमेत रोकेर नाकाबन्दी लगाएको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भनिरहनु भएको थियो त्यो बेला अन्दोलनरत मधेश केन्द्रित दलले नाकाबन्दी भारतले लगाएको होइन हामीले नाका बन्द गरेका हौं भनेका थिए । यी दुईबीचको भिन्नता के छ ? नेताजीहरुलाई लाग्छ, हाम्रो कुरा कसैलाई थाहै छैन् । त्यही सम्झेर उहाँले चितवनमा गएर पार्टी एकता गर्ने र साझा घोषणा र उमेद्वारका साथ जनतामा गएको र जनताले पनि झण्डै दुईतिहाई भोट दिएको बताउनुभयो । त्यहाँ पनि उहाँले स्थायी र स्थिर सरकारको लागि हामीले नेपाली जनतासँग भोट मागेको भन्ने आँट गर्नु भएन । त्यतिखेर नेपाली जनताले भोट माग्दै गर्दा प्रष्टरुपमा भनेका थिए, ‘आजलाई होइन भोलिलाई हाम्रो मत ओलीलाई’ । आफ्नै पार्टीको स्थिर सरकारलाई किन अस्थिर बनाउने ? उहाँहरुले सोच्नु भएन । अहिले नेकपाको अन्तरिम विधान विपरित बहुमत र अल्पमतको बहस गराइरहनु भएको छ । स्थायी कमिटीले पार्टीको निर्देशन राजीनामा देउ भन्छ, अध्यक्ष ओली भन्नुहुन्छ ‘विधान विपरित राजीनामा दिन्न, कार्यकर्ता र जनतालाई विश्वासघात गर्दिन’ यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै पार्टीलाई नटेर्ने भनेर ओलीलाई किन परिभाषित गर्न स्थायी कमिटी किन खोजिएको छ ?
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले बोलेको हरेक एजेण्डाको विरोध पार्टी भित्रैबाट किन हुन्छ ? यसले पार्टी एकतालाई बलियो बनाउँछ कि कमजोर ? अहिले केपी ओलीलाई कमजोर बनाइयो भने ओलीमात्रै कमजोर होइन नेकपा पनि कमजोर हुने र देश पनि कमजोर हुनुका साथै यो प्रणालि नै खराव हो अनि गणतन्त्र अफापसिद्ध भएको भनी बौराउनेको जमात बढ्न सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत २० वर्षमा हुन नसकेको काम दुई वर्षमा गरेर देखाउनु भएको छ । त्यो पनि देशको कूल बजेटको ३० प्रतिशत मात्रै पूंजिगत खर्च गरेको अवस्थामा । पार्टीले पूजिगत खर्च यसरी बढाउ, जनताको आवश्यकताको क्षेत्र यो यो हो भनेर कुनै नयाँ शीर्षक दिन सकेको छैन । गरेको कामको पनि पार्टीले अपनत्व लिन सकिरहेको छैन अनि नेताहरु संसदीय मोर्चाको कामको अपनत्व लिन प्रधानमन्त्रीले दिएनन् भनेर कुर्लिनुको के अर्थ हुन्छ ? अवसर पाएकाले चलाउन जान्नु पर्दछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अयोध्या नेपालमा छ, राम नेपालका छोरा हुन ज्वाई होइनन् यो खोजीको विषय भएको छ भन्नुहुँदा भारतले आपत्ति जनाउनुभन्दा अगाडि पार्टीका नेता बामदेव गौतमले ‘ओलीले बोली फिर्ता लिनु प¥यो किन भन्नुप¥यो ? जहाँ पनि विरोध किन ? प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको भनाईले के अर्थ राख्छ ? किन भन्नु भयो ? यसमा के के उद्देश्य रहेका छन् पार्टीले खोजी ग¥यो ? गरेन् । बरु नेताहरु बुरुक्कै उफ्रिए । तर, कार्यकर्ताहरुले ओलीको भनाइलाई स्वावलम्बी नेपालतर्फ किन रुपान्तरण नगर्ने भन्ने सोचेका छन् । यसको अर्थ छ । संधै भारतले नेपाललाई एउटा न एउटा एजेण्डा निकालेर अल्झाइरहेको हुन्थ्यो । जहिले पनि भारतीय अभियानलाई नेपालले पछ्याउने गरेको थियो । अब त्यो जमाना उल्टिएको छ । ओली अब भारतलाई नेपालको लाइनमा पछ्याउन लगाउँदै ह्ुनुहुन्छ । खै नेपाली नेताहरुले बुझेको ? कोरोना अभियानमा नेपालले व्यवस्थित कार्ययोजना ल्यायो फागुनदेखि नै कोरोना विरुद्धको अभियानमा हामीहरु जादैछौं भनी जनतामा सचेतना ल्याउने र चैतदेखि बन्दाबन्दीको अभियान शुरु ग¥यो । त्यसलाई भारतले नेपाललाई पछ्याउन नसकेकोले अहिले भारतको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । नेपाल खतरामुक्त छ भन्ने मेरो भनाई होइन् । तर, नेपालमा कोरोना कहाँछ भन्नेकुरा नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई थाहा छ भारतलाई थाहा छैन । नेपालको अभियानमा केही भ्रष्टाचारको मुद्दा उठेको छ । तर, ओली सरकारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा कसैलाई बाँकी राख्दैन भन्नेकुरा नेपाली जनतालाई विश्वास छ । पार्टीले यसमा महाधिवेशनको जोड घटाउ गरेर भष्टाचारलाई संरक्षण नगरोस् । अर्को सरकारले व्यवस्थित गर्न नसकेको क्षेत्र भनेको क्वारिन्टिन हो । अन्य वादबाँकी कुरामा सरकारले अब्बल काम गरेको छ । अहिले सरकारको विरोध गर्नेहरु स्थायी रुपमै ओली विरोधी हुन् भन्दा तपाईलाई तितो लाग्न सक्छ तर, यथार्थ यस्तै छ । लौ भन्नुस ! ओलीको विरोध गर्नेहरुले कहिले कुन मुद्दामा सर्पोट र सहयोग गरेका छन् । तपाईले देख्नु भएको केही एजेण्डाहरु छन् ती एजेण्डामा ओलीको पक्ष लिएको होइन् आफ्नो बचाउ गरेको हो । यो कुरा साधारण कार्यकर्तालाई पनि थाहा छ ।
लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीमा ओली सरकारलाई कसैले सहयोग गरेको होइन यो उनीहरुको कर्तव्य हो । यो कर्तव्य पनि पूरा नगरे जनताले लाठो हान्छन् भनेर उनीहरु एक ठाउँमा उभिएका हुन् । यो मुद्दामा पनि प्रधानमन्त्री ओली विरोध गर्नेहरुले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी नक्शामा मात्रै ल्याएरका छन् भूगोलमा खोई ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । ओली विरोधीहरु जान्ने भए ओलीलाई बलियो बनाएर अहिलेसम्म हुन नसकेको काम गर्नु पर्दथ्यो । ओली सरकारलाई बलियो बनाउने होभने अबको ५÷७ बर्षभित्र चुच्चे नक्शाको भूगोल पनि नेपालमा आउँछ । अब भारतसँग कुनै विकल्प छैन । त्यो जमिन फिर्ता गर्नै पर्छ । तर, त्यसको लागि दह्रो, बलियो सरकार हुनु पर्दछ । नक्शा जारी गर्न वित्तिकै राजीनामा माग्ने हाम्रा नेताको प्रवृत्तिले नेपालले स्वाभिमान जोगाउन सक्दैन । नेपाली कलाकार राजा राजेन्द्रले देख्नु भएको राजनैतिक चिन्तन पनि प्रधानमन्त्री भई सकेका नेताहरुले राख्नु भएको छैन । उहाँले भन्नुभयो ‘फष्ट नेशन’ सेकेण्ड कोरोना त्यसपछिमात्रै अन्यकुराहरु । हाम्रा नेताहरु यी दुबै कुरा छोडेर उहाँहरु अन्य उल्झनमा लाग्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरोध गर्नेहरुले अर्को गल्ती गरेका छन् । त्यो भनेको हिन्दू संस्कृतिसँग जोडिएको अयोध्या नेपालमा छ, भनेर भन्दा उनीहरुले कोकोहोलो मच्चाए । त्यो भारतले मच्चाउनु पर्दथ्यो । र, अहिले भारत त्यसैमा अल्झिएको छ । काम नपाएर प्रधानमन्त्री ओलीको अनाप सनाप रिर्पोट बनाएर उफ्रिने भारतीय मिडियालाई अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले दिनु भएको ‘टाक्स’ मा ‘होमवर्क’ गरी रहेका छन् । ओलीले सोचेजस्तो अरुले सोचिदिएको भए नेपाल यस्तो पिछडिएको हुने थिएन । भारतले गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका होइनन् भारतमा जन्मिएका हुन् भन्दा नदुख्ने नेपाली नेताहरुलाई हिन्दू संस्कृतिसँग जोडिएको अयोध्या नेपालमा छ । भारतको अयोध्या त सिक्किमको चारधाम जस्तै हो । ओलीले भन्नु भएजस्तै अब संरक्षणको अभावमा छटपटिएको हिन्दू संस्कृतिसँग जोडिएको नेपालको अयोध्याको संरक्षण उत्खनन् र विकास गरिनु पर्दछ । यसको महत्वको बारेमा खोजी हुनु प¥यो अहिले केही देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीहरुले त्यसको खोजी शुरु गरेका छन् । सबै नेताहरुले एकपटक भृकुटी खुम्च्याएर सोच्नुहोस् त ! प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नु भएको भनाईले नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा कति महत्व राख्छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले यो गन्तव्यको प्रचारप्रसार गर्ने, प्याकेज बनाउने र विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट त्यहाँ पुग्ने सडक बनाउने, भौतिक पूर्वाधारहरु तयार गर्ने काम गरौं त के हुन्छ । भारतले इन्दिरा गान्धीको चिहानलाई पर्यटकीय स्थल बनाएको छभने हिन्दू संस्कृतिसँग जोडिएको हाम्रो अयोध्या पर्यटकीय क्षेत्र बन्दैन ? विश्वभरिका पर्यटकहरु एक पटक ओलीले भनेको अयोध्या हेर्न जाउँ भन्छन् र आउँछन् । अब भन्नुस् यसले नेपालको अधोगति हुन्छ कि प्रगति ?
प्रधानमन्त्री ओलीले सत्यकुरा भनिदिदा हिन्दूको आस्था र विश्वासमाथि प्रहार भएको छैन बरु आस्था र विश्वासमा व्यापार गर्नेहरु झस्किएका छन् । उनीहरुको २५ प्रतिशत व्यापार सुक्ने छ । नेपालको व्यापार अहिले १० प्रतिशत भए पनि बढ्ने छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नु भएको अयोध्याको कुराले छल गर्नेहरु मात्रै हल्लिएका छैनन् बरु उनीहरुलाई नेपालमै बसेर सहयोग गर्नेहरु पनि हल्लिएका छन् । अब नेपाललाई भारतले गौतमबुद्ध भारतमा जन्मिएको र चीनले सगरमाथा चीमा पर्छ भन्ने जस्ता एजेण्डा थोपर्ने होइन बरु नेपालले उनीहरुलाई एजेण्डा दिनेछ भन्ने कुराको संकेत प्रधानमन्त्री ओलीले दिनु भएको छ । म फेरि पनि राजा राजेन्द्रकै भनाईमा जान चाहन्छु उहाँले सडकमा भन्नु भएको छ, तपाईहरुले अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर जो प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भारतले बनाई दिएको हुनेछ । किनभने ओलीले चुच्चे नक्शा बनाएको र भारतीय छोरीलाई नेपालले बुहारी बनाउँदा दिइने नागरिकताको विधी बनाए त्यसकारण भारतले ओलीलाई हटाउन खोजेको भनेर जनताले भन्नेछन् । इतिहास साक्षी छ, वी पी कोइरालाको सरकार बलियो भएपछि मातृकालाई प्रधानमन्त्री बनाएको, र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बहुमतीय सरकार ढाल्ने काम अनि अहिले ओली सरकार ढाल्ने षडयन्त्रले एउटै संकेत गरिरहेको छ । त्यो हो भारत नेपालमा स्थिरता भएको देख्न चाहदैन् अनि भारतको काम गर्ने नेपालीहरु रहुन्जेल यस्तो स्थिति आई रहन्छ । त्यसकारण अरुको डिजाइनमा होइन बरु आफ्नै डिजाइनमा चलौं । प्रधानमन्त्री यस्तै डिजाइनमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको कामले के सन्देश दिन्छ ? खोज्ने गरौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेको बोली फिर्ता लिनुहुन्न बरु तपाईहरुले बोलेको बोली फिर्ता लिनु पर्छ । ओलीको बोली बन्दूकको गोली सरह हो । जो निस्केपछि फर्किदैन ।